Liva Andriamanantena · Jolay 2016 · Global Voices teny Malagasy
Liva Andriamanantena · Jolay, 2016
Lahatsoratra farany an'i Liva Andriamanantena tamin'ny Jolay, 2016
Azia Afovoany sy Kaokazy 19 Jolay 2016
Eoropa Afovoany & Atsinanana 19 Jolay 2016
Hafa Ny Fomba Fijerin'ny Vehivavy Azerbaijani Ny #TsyMatahotraMitenyAho
"I do not believe there is one woman [in Azerbaijan] who has not faced harassment or violence." "Tsy mino aho fa tsy misy vehivavy [ao Azerbaijan] tsy niharan'ny fanorisorenana na herisetra."
Manana Hira Famantarana ‘Doo Doo Doo Doo’ Ny Fialan'i David Cameron Tsy Ho Praiministra Britanika
Eoropa Andrefana 15 Jolay 2016
Nanome aingam-panahy tamin'ny fiangaliana mozika, hatsikana ary fanehoan-kevitra maro ny melodian'i Cameron voarakitra tao amin'ny fandraisam-peony rehefa avy nanambara ny fialany izy.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 14 Jolay 2016
Eoropa Afovoany & Atsinanana 12 Jolay 2016
Azia Atsinanana 12 Jolay 2016
"When regime wanted to kill, labels them [conspirators] not loyal to the regime. Then they kill them." "Rehefa te hamono ny fitondrana, dia antsoiny hoe [mpiray tetika] tsy mahatoky ny fitondrana izy ireny. Ary avy eo vonoiny. "
Sarin'ny Lolo Mirehitra Mahagaga sy Mahatalanjona Ao Japana
Toerana mahafinaritra ny eto an-tany.
Azia Atsinanana 09 Jolay 2016